Popayán၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗိသုကာအစဉ်အလာ | Absolut ခရီးသွား
maruuzen | | ကိုလံဘီယာ
လက်တင်အမေရိကတွင်ကောင်းမွန်သောနေရာများရှိသည် ကိုလံဘီယာ အကောင်းဆုံးအချို့ကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဥပမာ, Popayanကိုလိုနီအမေရိကရှိရှေးအကျဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သောမြို့များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသောဗိသုကာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ရှိသည်။
Popayán၏သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်သည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ မတူကွဲပြား။ အရသာရှိသောအစားအစာများရှိသောမြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်လည်ပတ်သည်နှင့်အကောင်းဆုံးအမှတ်တရများနှင့်စွန့်ပစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ယနေ့ Absolut Viajes မှာ ကြွယ်ဝသောPopayán၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗိသုကာအစဉ်အလာ ...
2 Popayán, အဖြူရောင်မြို့
3 Popayánမှ Getaways
ဒီကိုလံဘီယာမြို့ က Cauca ဌာန၌တည်ရှိ၏နိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်ရှိအနောက်နှင့်အလယ်ဗဟိုကော်လ်ဒါရာအကြားရှိသည်။ Isaအလွန်ငလျင်ဇုန် နှင့်မြို့သည်ငလျင်များစွာခံစားခဲ့ရသဖြင့်၎င်း၏အဆောက်အအုံကြီး၏အမွေအနှစ်များကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆိုပါ Cauca မြစ်ကဖြတ်ကူးနှင့်ပျော်မွေ့ အတော်လေးသမရာသီဥတု ယနေ့ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခြားကမ္ဘာ့ဒေသများစွာကဲ့သို့ပင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည်မကြာခဏပျံ့နှံ့နေသည်။
Popayán၏သမိုင်းသည်ကိုလိုနီနယ်ပယ်မှစတင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ခုရှိ prehispanic သမိုင်း သူက bequeathed သိရသည် ပိရမစ်တည်ဆောက်ပုံ၊ လမ်းများနှင့်သင်္ချိုင်းများ။ ၁၅၃၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်စပိန်သည်Popayánကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်, El Dorado ၏ search အတွက်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရှာဖွေရာတွင်ကွီတိုနှင့်စန်တီယာဂိုဒီကာလီတို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည့်တ ဦး တည်းသောအဒယ်လန်းတိုဒိုဘာလာကာဇာကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ မြို့တော်သည်၎င်း၏ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအမည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းစပိန်အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်များအတိုင်းလိုက်နာသောကိုလိုနီမြို့တော်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကောင်စီ၊ မြို့တော်ဝန်တွေ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေရှိခဲ့တယ်။
စပိန်လူမျိုးများသည်မျိုးစေ့နှင့်ကျွဲနွားများကိုဤနိုင်ငံများသို့ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာမကြာမီအရာအားလုံးသည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည် Oro နှင့်၎င်း၏ခေါင်းပုံဖြတ်။ ထို့ကြောင့်Popayánသည်တစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည် နယူး Granada ၏ Viceroyalty ၏အရေးအပါဆုံးနှင့်အချမ်းသာဆုံးမြို့ကြီးများ။ ရွှေနှင့်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်မြို့၏ကြွယ်ဝမှု၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်ကPopayánသည် Cartagena နှင့်Bogotáကဲ့သို့သောအရေးပါသောကိုလိုနီမြို့များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ဒေသခံမိသားစုများ၏ကြွယ် ၀ မှုသည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအနုပညာနယ်ပယ်တွင်တကယ့်အိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ယနေ့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗိသုကာဘဏ္treာကိုတက်စေသည်။
ဤသည်ကိုလူသိများသည်။ Popayán, အဖြူမြို့။ အမှန်တရားမှာအချိန်ကာလအရနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုများနှင့်မြေငလျင်လှုပ်မှုများ၊ အဆောက်အအုံဟောင်းများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ သူ့ သမိုင်းဝင်ခမောက် လှပသော၊ လှပသောအဆောက်အအုံများ၊ အိမ်များ၊ ကျောက်ပြားခင်းထားသောလမ်းများ၊ ပန်းများနှင့်အတူအိပ်ယာခင်းများ၊ တစ်နှင်းဖုံးဖြူခြယ်သ ဒါဟာနီးပါးကစင်ကြယ်သန့်ရှင်းစေသည်။ အမေရိကန်ကိုလိုနီစတိုင်နမူနာတစ်ခု။
Popayan ကလီကနေသုံးနာရီသာဝေးတယ် ကားဖြင့်သွားနှင့်ထို့ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား dest ည့်နေရာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သမိုင်းဝင်စင်တာ၊ ခြေလျင်လျှောက်လှမ်းလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် XNUMX, XNUMX နှင့် XNUMX ရာစု၏ဗိသုကာ။ ဒီမှာ Caldas ပန်းခြံ, ကကြီးပွားရာမှမြို့၏စိတ်နှလုံး။ ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လှပသောကိုလိုနီအဆောက်အအုံများရှိသည်။
၁၈ ရာစုမှလှပသည် နာရီမျှော်စင်လည်း«Popayán၏နှာခေါင်း»အဖြစ်လူသိများ။ နာရီကိုကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်လန်ဒန်မှသီးသန့်ယူဆောင်လာသည့်အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် Humilladero တံတားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြောက်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးများနှင့်ဗဟိုကိုဆက်သွယ်ပေးသောမြို့၏ရှုခင်းသည်ကြီးကျယ်သောနေရာမှဖြစ်သည်။ အရှည်မီတာ ၂၄၀ ရှိပြီးမြို့၏မူလဝင်ပေါက်ကိုအမှတ်အသားပြုသည်။
၎င်းကို ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ်တွင်ပင်မရင်ပြင်မှလှမ်းလှမ်းများသာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုပါ ချုပ်နှောင်ခံတံတား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ Molino မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရန်ခွင့်ပြုရန် ၁၇၁၃ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောလှပသောတံတားတစ်စင်း။
သင်လမ်းလျှောက်သူများစွာတွေ့လိမ့်မည် ကဖေးများ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ နှင့်သင်တန်း, ဘာသာရေးဘုရားကျောင်း။ The Iglesia က de San Francisco ၎င်းသည်အကြီးဆုံးကိုလိုနီဗိမာန်တော်ဖြစ်ပြီးအလွန်တင့်တယ်လှ၏။ အဆောက်အအုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အတွက်လမ်းညွှန်ဖြင့်ခရီးကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်အရိုးအိုးသည်ကွဲထွက်သွားပြီး mummified body ၆ ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်နှစ်ယောက်သာကျန်ကြပြီး၎င်းတို့ကိုအမြဲမမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော်ခရီးစဉ်ဖြင့်ကံကောင်းလိမ့်မည်။ ထောင့်တစ်နေရာမှာအခြားဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုရှိတယ်။
ဥပမာအားထိုမြို့ရှိရှေးအကျဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် ၁၅၄၆ မှစတင်ခဲ့ပြီး La Ermita ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည်အယ်လ်မိုရိုနှင့်မြို့လယ်အကြားရှိသည်။ အလှဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်လိမ္မော်ရောင်ကိုလိုနီခေါင်မိုးများနှင့်လှပသောနံရံကပ်နံရံဆေးရေးပန်းချီဟောင်းများကိုကောင်းမွန်စွာရှုမြင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ရာစုနှစ်ဟောင်းမြို့ပြတိုက်ရှိပါတယ်။ The Guillermo Valencia ပြတိုက် ၎င်းသည် ၁၈ ရာစု၏ကြော့ရှင်းသောအိမ်ကြီးတွင်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ပြီးပန်းချီကား၊ ပရိဘောဂနှင့်ဓာတ်ပုံဟောင်းများပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်ဒေသခံကဗျာဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ပြတိုက်သည် Mosquera အိမ်ပြတိုက်၁၉ ရာစုအတွင်းကိုလံဘီယာသမ္မတဗိုလ်ချုပ်ကြီး Tomas Cipriano de Mosquera ၏နေအိမ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ၁၈ ရာစုအိမ်ကြီးတွင်လည်းရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကနံရံတစ်ခုပေါ်မှာသူ့နှလုံးနဲ့အမှိုတွေသုံးနေတယ်လို့ပြောတယ်။
El ဘာသာရေးအနုပညာ Archdiocesan ပြတိုက် ၁၇ မှ ၁၉ ရာစုအတွင်းပန်းချီကားများ၊ ရုပ်တုများ၊ ငွေထည်ပစ္စည်းများ၊ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်တက္ကသိုလ်၏နယ်ပယ်များတွင်ကိုလံဘီယာရှိအကောင်းဆုံးသောပြတိုက်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့Popayánဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်မသွားနိုင်ဘဲခေတ္တထောင်တစ်ထောင်နဲ့ခြေလျင်ခရီးသွားနိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။ သင်၏ခြေလှမ်းများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မွှေးကြိုင်သောရနံ့များထွက်ပေါ်လာသည့်နေရာ၊ လူနေအိမ်များ၊ ပန်းတစ်သောင်းနှင့်အတူအဆောင်အပြောက်များ၊ အဖြူရောင်မျက်နှာစာများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များအကြားဤအရပ် မှနေ၍ သင့်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့သွားသော်၎င်းကိုတည်ထောင်သူSebastián de Belalcázar၏ရုပ်ထုသည်ရှေးဟောင်းပိရမစ်၏ထိပ်တွင်တည်ရှိပြီး၊ အယ်လ် Morro က de Tulcán.
အကယ်၍ သင့်တွင်နေသာ။ ကြည်လင်သောနေ့တစ်နေ့ရှိပါကPopayán Old Town ကိုကျော်။ ပင်မြင်နိုင်ပြီးလှပသောတောင်တန်းများကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာကိုတက်ဖို့အသက်ရှုဖို့တစ်နှစ်ခွဲလောက်အချိန်ယူရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီမြင်ကွင်းကနေမြင့်တဲ့အထိအရာအားလုံးကိုမမြင်ဘဲသင်မထွက်သွားနိုင်ဘူး။
အစမှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကိုလံဘီယာတွင်အကောင်းဆုံး gastronomies တစ်ခု ဒါကြောင့်မင်းတို့ဟင်းလျာတွေကိုမကြိုးစားဘဲမထွက်နိုင်ဘူး။ လူကြိုက်အများဆုံးဒေသခံဟင်းဖြစ်ပါတယ် Paisa Trayဆန်၊ ကြက်ဥကြော်၊ ရွှေဝက်သား၊ ငှက်ပျောသီးနှင့်ထောပတ်သီးများပါရှိသည်။ ပျော်စရာပါ နှင့်သင်တန်း၏, ဂန္ .ရာ သူတို့ဖြစ်စေချို့တဲ့နေကြသည်မဟုတ်။
စားသောက်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုမှာအဓိကစတုရန်းမီတာအနည်းငယ်အကွာတွင်ရှိပြီးရှေးအကျဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သောတစ်ခုဖြစ်သော La Fresca ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပထမတစ်ချက်မှာအများကြီးမပြောပေမယ့်သူတို့ရဲ့ pipian empanaditas (မွှေးကြိုင်တဲ့မြေပဲဆော့စ်နဲ့အာလူးတွေနဲ့ပြည့်ကျပ်နေတဲ့) အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေပါ။
အကယ်၍ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်Popayánတွင်တစ်ရက်ထက် ပို၍ နေလိုလျှင်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်လည်ပတ်မှုများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ချဉ်းကပ်နိုင်ပါတယ် San Agustínနှင့်၎င်း၏ကိုလံဘီယာမတိုင်မီ site ကိုငါသိ၏ အရာအားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည် ယူနက်စကို။
အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် Purace အမျိုးသားဥယျာဉ်ဒေသတွင်း၌အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်တွင်ထာဝရနှင်းဖုံးနေသောမီးတောင်တစ်လုံးရှိပြီးပန်းခြံအား၎င်း၏အမည်ကိုပေးသည်။ သင်တောင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်တက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပါကဤသည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကားမစီးတဲ့လမ်းပေါ်ကဘတ်စ်ကားစီးပြီးသွားနိုင်ပေမယ့်ရေပူစမ်း၊ အခိုးအငွေ့၊ ကံကောင်းခြင်းအားဖြင့်တော့အင်ဒီးစ်မှကွန်ဒိုတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Popayánမှတစ်နာရီဖြစ်သည် Silvia, တောင်ငယ်တစ်မြို့ အပတ်တိုင်းတစ် ဦး လည်းမရှိသောကြောင့်အလွန်ကျော်ကြား ဌာနေစျေးကွက်။ ရက်ချိန်းသည်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည် ထိုနေ့တွင်ဂူဘွိုင်နိုလူမျိုးများသည်ကျေးရွာများမှ ထွက်၍ ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းရန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ရောက်လာသည်။ ထိုကျေးရွာများသို့သူတို့သိကျွမ်းရန်သို့မဟုတ်လယ်ယာတစ်ခုတွင်နေ့လည်စာစားရန်အတွက်ထိုရွာများသို့ဂျစ်ခရီးအနည်းငယ်သွားရန်သင်လည်းစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
သင်ရေပူစမ်းကိုကြိုက်လား? ထို့နောက်သင်သွားနိုင်သည် Coconuco အပူရေချိုးကန်Popayánမှတစ်ခြေလှမ်းသာဝေးသည်။ ၎င်းတွင်မတူညီသောရေကန်နှစ်ခု၊ ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောနှင့်ပူနွေးသောရေများရှိသည်။ သင်က Purace ကိုတက်ပြီးလျှင်၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်စေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » Popayán၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗိသုကာအစဉ်အလာ
Fabian Lara Oña ဟုသူကပြောသည်
အီကွေဒေါနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးကဲ့သို့စာရေးဆရာဖြစ်ရမည်ဟူသောလှပသောဗိသုကာပညာသည်စာရေးဆရာများကိုထိုခေတ်ရှိဗိသုကာများနှင့်တည်ဆောက်သူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိရန်၊ စတိုင် (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါသလား) ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအဖုံးများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုများကိုရှာဖွေရန်ကောင်းသည်။ စာမျက်နှာ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်ဂုဏ်ပြုလွှာများ
fabian lara oñaအားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၊ Popayan မြို့သည်မည်မျှလှပသနည်း။ ကျွန်ုပ်သည်မစ္စတာ Yimi Gonzalez သို့မဟုတ် Mr Luz Dary သို့မဟုတ် Mr. Alfonso တို့ကိုမစ္စတာ Yimi ၏မွေးစားမိဘများနှင့် Buenaventura မွို့မှသူ၏မိခင် Dolores ကိုယ်စားရှာနေသည်။ မက်ဒီနာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို 316-3299895 သို့မဟုတ် 314-8498161 သို့မဟုတ် 310-3279514 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
doris panamanian သို့ပြန်သွားရန်